Akụkọ - Dochie "ihe nzacha" nke nchacha mmiri n'ụlọ gị. Cheta ịlaghachi drinkụọ “mmiri dị ọcha”!
Ugbu a ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ na-akawanye mma, ha ebidola ịchụ ndụ. N'agbanyeghị ma ị na-eri, na-a drinkụ ma ọ bụ na-eji na ndụ, ọ dị mkpa ka ị gbasie ike, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị ga-eji ụfọdụ igwe iji nyere aka, ka ị wee hụ na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị dị mma ma dị mma.
Mmiri bụ ihe dị mkpa na ndụ anyị, ugbu a ọtụtụ mmadụ na-amalite ị paya ntị na nchekwa nke iji mmiri. N'ozuzu, a na-ebugharị mmiri dị n'ụlọ anyị site na osisi mmiri. Disdị mmiri a na-egbu nje ma na-ekpochapu, ma ụfọdụ gas ma ọ bụ ihe na-esi ọnwụ na-adịgide na mmiri, na nchara ga-adị na pipụ mmiri. Shegbapụ, ma si otú ahụ banye na ndụ anyị na pipeline na mmiri na-asọ.
Ọ bụkwa maka ihe ndị a mere na ọtụtụ ezinụlọ ugbu a na-etinye ihe nzacha mmiri iji nyere aka mee ka mmiri dị ọcha. N'ihi na mmiri na-ehicha mmiri nwere ihe nzacha, ọ nwere ike ịmịkọrọ ọtụtụ adịghị ọcha na nje bacteria na mmiri pọmpụ, nke mere na mmiri mmiri si na-ehicha mmiri ga-adị mma ma dị ọcha maka ị drinkingụ ma ọ bụ isi nri. Agbanyeghị, n'ihi na ejiri ihe nzacha maka nzacha, a ga-edochikwa ihe ndozi ahụ. Ugboro ole ka ekwesịrị ịgbanwe ya?
N'oge a, ụdị ihe nhicha mmiri dị n'ahịa dị iche iche, na ojiji okike nke ihe nza dị iche, ọnụahịa nke ụdị ngbanwe ọ bụla dịkwa iche. Huahua taa na-agwa gị oge ole ị ga - eji dochie ụdị ihe nza atọ dị na ahịa. ahụike!
1. Ọrụ carbon nzacha
Anyị niile maara na carbon a na-arụ ọrụ bụ ihe nwere ezigbo adsorption, ya mere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe nhicha mmiri na-eji ya dị ka ihe bụ isi nke nzacha mmiri. N'ozuzu, mgbe ejiri carbon rụọ ọrụ dị ka ihe nzacha, a ghaghị ekewa ya na carbon na-arụ ọrụ na carbon na-arụ ọrụ, ka e wee nwee ike iji ọkwa abụọ ahụ mee ihe iji mee ka isi ísì na chlorine dị na mmiri. Agbanyeghị, a ga-ejupụta carbon na-arụ ọrụ mgbe ejiri ya rụọ ọrụ ogologo oge, ọ na-adịkarị mkpa ịgbanwe ya kwa ọnwa isii ruo otu afọ.
PP owu bụ ụdị ihe na-ehichapụ nnukwu ihe na mmiri, dị ka ụdị ụdị mmiri na adịghị ọcha nke ígwè nwere ike ịdabere na ya igbochi n'èzí ọnụ ụzọ. O ha nhata na gauze, kechiri paịpụ iji nyere aka nyopụta irighiri irighiri ihe, maka na ihe ndị ọ na - asacha buru ibu, yabụ ndụ ọrụ ga - adị mkpụmkpụ karịa mmiri na - abata, ihe dị ka ọnwa 4 ka aga - agbanwe.
3. Ultrafiltration akpụkpọ ahụ
Mgbe ị nụrụ aha nke ultrafiltration akpụkpọ ahụ, ị ​​kwesịrị ịmara na olu nke ihe ọ na nzacha bụ n'ozuzu dịtụ obere. Mgbe edozichara ya, mmiri pọmpụ nwere ike gbanwee kpamkpam n'ime mmiri dị ọcha. Ruru ya ala nzacha àgwà, nnọchi oge ga-ndammana ogologo, n'ozuzu nanị otu ugboro kwa afọ 2.
Mgbe a na-eji ihe nhicha mmiri, ihe kachasị mkpa bụ ịgụta ihe nzacha ahụ, n'ihi ya, anyị kwesịrị dochie ya ma hichaa ya n'oge, iji hụ na anyị nwere ike ị drinkụ mmiri dị ọcha oge ọ bụla!